Xariirka Dib-u-habeynta Unilorin www.remedial.unilorin.edu.ng/rem_login.php: Warka Dugsiga ee Hadda
Xariirka Dib-u-habeynta Unilorin: Tani waa in la ogeysiiyo dhammaan ardayda da'da ah iyo kuwa rajada leh in bogga waxtarka ee Jaamacadda Ilorin uu socdo oo socdo.
Boggan wuxuu fikrad kaa siin doonaa waxa laga filan karo bogga. Sidoo kale, waxay kugu hagi doontaa sida loo galo bogga oo loo cusbooneysiiyo marka liiska soo-gelitaanka la sii daayo. Si kastaba ha noqotee, ka hor markaa, maxaad ka ogtahay Unilorin?
Marka, dhammaan ardayda dhigata barnaamijka sixitaanka waxay ku fulin karaan waxqabadyo tacliimeed oo muhiim ah bogga.
Jaamacadda Ilorin (Unilorin)
Jaamacadda Ilorin waxaa sidoo kale loo yaqaan Unilorin. Waa jaamacad ay leedahay dowladda dhexe oo ku taal Ilorin, Gobolka Kwara, Nigeria. Sidoo kale, waxaa lagu aasaasay Wareegto ka soo baxday Dowladdii Milatariga ee Federaalka bishii Ogosto, 1975. Waxay ku bilaabatay 1975 sidii Kuliyad Jaamacadeed. ku xidhan Jaamacadda Ibadan.
Aasaasiddu waxay ujeedkeedu ahaa inay hirgeliso mid ka mid ah dardaaranka waxbarashada ee Qorshaha Saddexaad ee Horumarinta Qaranka. Tanina waxaa loogu talagalay in la siiyo fursado dheeri ah dadka reer Nigeria ee doonaya inay helaan waxbarasho jaamacadeed.
Sidoo kale, waa in la abuuro shaqaale heer sare ah, oo muhiim u ah dhaqaalaha si xawliga ah u sii fidaya. Si kastaba ha noqotee, marka la barbardhigo hay'adaha kale ee tacliinta sare ee dalka ka jira, machadku wuxuu leeyahay mid ka mid ah dhul-baaxadda ugu weyn ee baaxadda leh qiyaastii 5000 hektar oo dhul ah.
Muhiimadda Xariirka Toosinta ee Unilorin
The Xulka bogga 'Unilorin Remedial' waxaa loo sameeyay ardaydii hore iyo kuwa mustaqbalka ee Jaamacadda. Sidoo kale, waa inay abuurto koonto ama gasho si loo fuliyo ficilada tacliimeed qaarkood ee sahlan. Tusaale:
Soo galitaanka Xariirka Unilorin
Jaamacadda Ilorin (UNILORIN) Barta galitaanka ardayda ee toosinta waxaa laga heli karaa xiriirka hoose:
Xariirka Unilorin: https://remedial.unilorin.edu.ng/rem_login.php
Sidoo kale, https://ioe.unilorin.edu.ng/login.php
UNILORIN Shuruudaha Ogolaanshaha Ogolaanshaha
Maamulka Jaamacadda Ilorin (UNILORIN) waxay ku martiqaadeysaa codsi musharrixiinta u qalma ee u qalma barnaamijka daaweynta. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah shuruudaha waaweyn:
1. Arts iyo Arts Arts:
Codsadeyaashu waa inay ku aflaxaan shan maado oo heerka Deyn ah oo aan ka badnayn laba fadhi. Tanina waxay ku jirtaa SSCE / GCE oo ay abaabuleen WAEC, NECO, NABTEB. Sidoo kale, tan waa inay kujirtaa maadooyinka waaweyn ee daraasadda.
Si kastaba ha noqotee, ogow in buundooyinka dhibcaha ee Luqadda Ingiriisiga iyo Xisaabta ay qasab ku tahay gelitaanka ugu dambeynta barnaamij kasta oo ka socda Jaamacadda Ilorin.
Sidoo kale, laba ka mid ah shanta maaddo waa inay ka yimaadaan Farshaxanka. Halka maadooyinka kale laga yaabo inay ka socdaan Cilmiga Bulshada.
Xusuusin: Ma jiro barnaamij hordhac ah oo ku baxa BA (Hons.) Ingiriisiga
2. Beeraha, injineernimada iyo teknolojiyadda, cilmiga deegaanka, cilmiga sayniska iyo sayniska, cilmiga teknolojiyada iyo tikniyoolajiyadda waxbarashada
Codsadeyaashu waa inay ku aflaxaan maadooyinka soo socda ee heerka amaahda: Luqadda Ingiriisiga, Bayoolajiga, Kimistariga, Xisaabta iyo Fiisigiska MA ka badna laba fadhi oo ka tirsan SSCE / GCE oo ay soo qabanqaabiyeen WAEC / NECO iyo NABTEB
UNILORIN Muddada Barnaamijka Sixitaanka
Barnaamijku waa muddo labo xilli-dugsiyeed ah (hal kulan waxbarasho).
Xaaladaha Guud ee Barnaamijka
Guddiga Dugsiga, siyaasaddiisa ku aaddan ka mid noqoshada tacliinta jaamacadda, ayaa oggolaaday in codsadayaasha haysta buundo ay ku gudbaan shan (5) O 'Level maadooyin laakiin yaraanta midkoodna Luqadda Ingiriisiga ama Xisaabta ay dalban karto barnaamijka.
Si kastaba ha noqotee, waa inay tahay inay iska diiwaangeliyeen oo ay heleen kaarka amaahda maadada la tixgelinayo gelitaanka barnaamijka shahaadada.
Sidoo kale, musharaxiinta doonaya inay bartaan injineernimada waa inay helaan buundooyinka dhibcaha ee Kimistariga, Xisaabta iyo Fiisigiska oo ay u fariistaan ​​Ingiriisiga, Kimistariga, Xisaabta iyo Fiisigiska ee JAMB / UTME.
Intaa waxaa sii dheer, musharrixiinta waa inay qoraan JAMB / UTMWaxay la socdaan iskudhaf maadooyin ah oo ku saabsan barnaamij kasta oo Farshaxan ama Saynis ah. Waana inuu helaa meesha ugu yar ee UTME ay ansaxisay barta jaamacaddu.
Tixgelinta gelitaanka barnaamijyada waxay ku saleysnaan doontaa waxqabadka iyo qoondada barnaamij kasta.
Sidoo kale, ardayda ka gudubtay dhamaadka iskuulka ee imtixaanada barnaamijka laakiin maheli karaan dhibcaha ugu yar ee JAMB / UTME ee ay jaamacadu ogolaatay waxay BANKI karaan natiijada sixitaanka si loogu isticmaalo sanadka soo socda oo kaliya.
Si kastaba ha noqotee, tan waxaa la siiyaa in meesha ugu yar ee JAMB / UTME laga gooyo oo la oggolaado sanadka soo socda la helo.
Sidoo kale, codsadayaashu waa inay ogaadaan in barnaamijku degan yahay.
Goobta UNILORIN Daweynta barnaamij
Goobta barnaamijku ka dhacayaa waa Dugsiga Daraasaadka Hordhaca ah, Fufu, Xarunta Dawlada Hoose ee Ilorin South, Kwara State. Sidan oo kale, codsadayaashu waa inay ogaadaan in barnaamijku degan yahay.
Sida loo hubiyo Liiska Ogolaanshaha Liiska ee UNILORIN
Gal boggaaga (https://remedial.unilorin.edu.ng/rem_login.php.). Si kastaba ha noqotee, ku samee tan Lambarkaaga Codsiga Sixitaanka. Tusaale: UIL / REM / 2018 /…, iyo lambarkaaga sirta ah si loo hubiyo heerkaaga gelitaanka.
Haddii lagu siiyo gelitaan kumeelgaar ah, ku buuxi foomka aqbalaadda a KHARASHKA LAGA QAADAN KARO oo ah Toban Kun oo Naira (N10,000). Tani MAYA wuxuu ka mid yahay khidmadaha iskuulka.
Macluumaadka kor ku xusan, waxaan aaminsanahay inaad hadda waxbadan ka ogtahay barnaamijka sixitaanka Unilorin. Si kastaba ha noqotee, hubi inaad la wadaagto macluumaadkan asxaabta.
Xariirka Ogolaanshaha UNILORIN www.uilugportal.unilorin.edu.ng/ Cusbooneysiintii Ugu Dambeysay
Shaqo qorista Jaamacadda Ilorin 2020 Arag Cusbooneysiinta Xariirka Xariirka ee ugu dambeeyay
Ka codso Hada Fursadaha Xirfadaha ee Mashruuca Xoojinta Qaab-dhismeedka Afrika ee Mashruuca Cunnaynta (SAPFF)
JAMB Novel 2021 Sida loo soo koobo JAMB Adeegsiga Novel-ka Ingiriisiga
Tallaabo Buuxda oo Tilmaam Tallaabo ah loogu talagalay Xariirka N-Power
JAMB Su'aalaha Ku Tiirsanaanta 2021 iyo Jawaabaha Layliga UTME
Saamaynta Daraasadaha iyo Maareynta Waqtiga ee Ugiv Ardayda Waxbarsata ee Hausa ee Jaamacadda Usmanu Danfodiyo University Sokoto
Tags: sida loo hubiyo liiska gelitaanka daaweynta unilorin, muhiimada ay leedahay bogga unilorin, shuruudaha gelitaanka daaweynta unilorin, bogga unilorin, soo galitaanka bogga unilorin, mudada barnaamijka hagaajinta unilorin, Jaamacadda Ilorin, goobta barnaamijka unilorin lagu daweeyo
« Qorista PricewaterhouseCooper ee Ku-Xigeenka Agaasimaha Maamulka 2021
PricewaterhouseCooper (PwC) Qorista Kaaliyeyaasha Maamulka ee Qalinjabinta 2021 »